के हो बिटक्वाइन (BTC) ? कसरी हुन्छ यसको कारोबार ? विडियो सहित
बिटक्वाइन भनेको एउटा डिजिटल मुद्रा (Currency) हो । जसको निर्माण र सञ्चालन विद्युतीय रूपले हुन्छ । यो दुनियाँमा प्रयोग भएका कम्प्युटरले गरेको गणितीय समस्याको समाधानबाट उत्पादित मुद्रा हो । जसको उत्पादन हुने प्रक्रियालाई हामी ‘माइनिङ’ पनि भन्छौं ।
साधारण मुद्राभन्दा फरक के छ ?
यो एउटा यस्तो मुद्रा हो जुन कुनै देशबाट सञ्चालित होइन । र, यसमाथि कुनै देश तथा व्यक्तिको कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण हुँदैन ।
अविष्कारक को हुन् ?
‘सेतोसी नाकामोटो’ नामक सफ्टवेयर डेभलपरद्वारा यसको प्रस्तावना गरिएको हो । जुन एउटा गणितीय प्रमाणका आधारको पेमेन्ट गर्ने प्रणाली हो । यो प्रस्तुत गर्नुको मूल कारण एउटा यस्तो मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउनुथियो, जसमाथि कसैको नियन्त्रण नहोस् । र, कमसेकम शुल्क तिरेर कारोबार गर्न पाइयोस् भन्ने हो ।
यसको छपाइ तथा वितरण कसले गर्छ ?
कसैले गर्दैन । यो मुद्राको कुनै पनि किसिमको बैंक वित्तीय संस्था तथा देशबाट भौतिक रूपमा छपाइ तथा वितरण हुँदैन । यो हामी मानिसको समुदयाबीच डिजिटल प्रक्रियाबाट उत्पादित मुद्रा हो । जुन समुदायमा जो कोही पनि आबद्घ हुन सक्छन् । बिटक्वाइन माइनिङ भनेको एउटा गणितीय समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ ।
के यो असीमित मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ ?
होइन । दुनियाँभरमा गरी २,१०,००,००० बिटक्वाइन मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ । जसमध्ये हालसम्म १,४०,००,००० भइसकेको छ । र, अरू माइनिङ हुने प्रक्रिया जारी छ । एक बिटक्वाइनलाई १० करोड हिस्सामा भाग गर्दा आउने एक भागलाई ‘सेतोसी’ भनिन्छ । त्यसले बिटक्वाइनको आविष्कारकको नामलाई जनाउँछ ।
यो केमा आधारित छ ?
साधारणतः प्रयोग हुने मुद्राहरू सुन तथा चाँदीमा आधारित छन् । जसको मतलब हामी कुनै पनि मुद्रा बैंकमा जमा गर्दा त्यसबराबरको सुन तथा चाँदी प्राप्त गर्न सक्छौं । तर, बिटक्वाइन सुन तथा चाँदीमा आधारित नभएर यो एउटा गणितीय प्रक्रियामा आधारित हो ।
दुनियाँभरमा मानिस सफ्टवेयरका मद्दतले गणितीय सूत्रको प्रयोग गरी यसको उत्पादन गर्छन् । जुन सूत्रहरू जो कोहीले पनि हेर्न सक्छन्, जसलाई हामी ओपन सोर्स पनि भन्छौं ।
यसका विशेषताहरू यस्ता छन् :
विकेन्द्रीकृत मुद्रा : बिटक्वाइन नेटवर्क कुनै देशबाट सञ्चालित होइन । अर्थात् कुनै पनि देशले यसलाई बन्द गर्न सक्दैन ।
सजिलोसँग राख्न मिल्ने : बैंक तथा वित्तीय संस्थाको झमेला पूर्ण खाता खोल्ने प्रक्रिया तथा बैंकको झन्झटिलो नियम तथा शुल्क नलाग्ने । केही सेकेन्डमै यसको सेटअप गरी राख्न मिल्ने ।
गुमनाम : बिटक्वाइन राख्न तथा प्रयोग गर्न कुनै पनि किसिमको नाम तथा ठेगानाको आवश्यकता पर्दैन ।
पारदर्शी : बिटक्वाइन नेटवर्कमा भएको हरेक गतिविधि एउटा लेजरमा समावेश गरिएको हुन्छ । जुन जो कोहीले पनि हेर्न सक्छन् । जसलाई हामी ब्लकचेन भन्छौं ।
नगन्य शुल्क : एक देशबाट अर्को देश तथा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बैंक तथा रेमिट्यान्सले ठूलो शुल्क लिने गर्छन् । तर, बिटक्वाइनमा त्यसको शुल्क नगन्य हुन्छ ।
फास्ट : बिटक्वाइनबाट पैसा कहीं पनि पठाउँदा केही मिनेटमै प्राप्त हुन्छ ।
फिर्ता लिन नमिल्ने : कारणवश कुनै गलत ठेगानामा बिटक्वाइन गएमा फिर्ता लिन मिल्दैन, जबसम्म प्राप्तकर्ताले फिर्ता पठाउँदैन ।
बिटक्वाइनबाट के–के गर्न मिल्छ ?
तपाईंले मोबाइलको रिचार्जदेखि पैसा पठाउनेसम्म, अरू मुद्रा जसरी नै बिटक्वाइनबाट हरेक किसिमको कारोबार गर्न सकिन्छ ।
बिटक्वाइन कहाँबाट प्राप्त गर्ने ?
बिटक्वाइन किन्न केही अनलाइन वेबसाइटहरू छन् । जसबाट हामी बिटक्वाइन किन्न सक्छौं या बिटक्वाइन भएको व्यक्तिलाई त्यसबराबरको रकम दिएर लिन सक्छौं ।
के यो गैरकानुनी हो ?
नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने, यसबारे कानुनमा केही उल्लेख भएको छैन । जसले गर्दा यो मुद्रा अझै अन्योलमै छ । जबकि, संसारका कयौं देश तथा ठूल्ठूला अन्तर्राष्ट्रिय बैंकबाट मान्यता प्राप्त भएर यसको प्रयोग भइरहेको छ । हालसालै रसियामा पनि बिटक्वाइनले मान्यता पाएको छ ।
प्रकाशित मिति २ माघ २०७४, मंगलवार १६:००
शेर्पा समुदायको संस्कृतिको संरक्षणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ : मुख्यमन्त्री पौडेल
सामूहिक गुथुक साँझ शनिवारदेखि सुरु
खिजिदेम्बामा हुने प्रदेश नं.-१ स्तरीय ग्याल्पो लोसार कार्यक्रमको तयारी पुर
विश्वभर कहाँ कहाँ मनाउदै छ ग्याल्पो ल्होसार ? सुची सहित
शेर्पा भाषा कक्षा शुरु
सिड्नीमा ग्ल्यापो ल्होसार भव्य हुने
एनआरएन पोर्चुगलका वरिष्ठ उपाध्यक्षद्वारा पत्रकार कुटपिट/सर्वत्र निन्दा र विरोध